Wal dhabiinsi fi sarbiinsii Itiyoophiyaa keessa jiru xumuramuu qaba
Walit bu’iins kaabaa Itiyoophiyaatti Itti fufee jiru yunaayitid Isteetsiin yaaddoo cimaa ta’ee jira. Haleelaan xiiyaara waraanaatiin magaala Maqalee irrati raawwate, waraana Mootummaa Itiyoophiyaatin, waraana Eertiraatin, Umnna naannoo Amaaraa fi Milishoota naanichaa idilee hin taaneen, Adda Bilisumaa Umata Tigraayin, akkasumas gareewwan hidhatan adda addaatin hokkori mirga namoomaa irratti raawwachaa jiruu fi dhumiinsi deemaa jiru hedduu suukanneesaadha.
"Haalawan farra mirga namoomaa akkanaa jabeesinee balaaleeffanna. Warreen walti bu’iinsichaa keessatti hirmaachaa jiran hundinuu mirga siviilotaa kabajuu irratti dirqama seera mirga namoomaa addunyaaf akka aboomaman gaafana,"jedhan Dubbi himaan Ministeera dhimma alaa Yunaayitid Isteets Niid Praayis.
Niid Praayis itti dabaluudhaan,
"barreessaa muummee mootummootaa gamtoomani fi hoggantootaa gamataa Afrikaa waliin waligalla. Walti bu’iinsa Kaabaa Itiyoophiyaatti adeemaa jiruuf falli karaa waraanaatin argamuu hin jiru. Falli siyaasaa waarinsa qabu argamuutu irra jira. Mootummaan Itiyoophiyaa fi Addi Bilisummaa Saba Tigraay dhukaasa dhaabani haal duree kamiinuu malee gara mariitti akka deeman gaafana>> jedhaniiru.
Odeeffannoon sarbiinsa mirga namoomaa ilaachisee jiru, qorannoon sadarkaa adduunyaa bilisa, ifaa fi amanamaa ta’ee akka taasifamuu dirqisiisa.
Gareewan walti bu’iinsichaa keessaa harka qaban hunduu qorannoo kanaaf eeyyamuudhaa fi haala mijeessuu qabu.
Mootummaan Itiyoophiyaa qaamolee mootummaa qorannoo taasisanuuf akka haala mijeessu fi akka eeyyama kennu addaan baafnee waamichaa goona.
<< haala mirga namoomaa Tigraay keessa jiru ilaalchisee komishiinin mirga namoomaa mootumoota gamtoomanii odeeffanoo inni baasu eegaa jirra.
Komishinin mirga namoomaa Mootummootaa gamtoomanii fi komishiinin mirga namoomaa Itiyoophiyaa bu’ii qorannoo waloodhaan taasisan yeroo dhihoo keessatti ifaa godhu jennee eegna. Akkasumas, komishiini qorannoo gamtaa Afrikaa komishiini mirga namoomaa fi saboota waliin akka haala waliin hojjanno uuman gaafanna. >> jedhan Niid Praayis.
Haalaa bilisa fi ifa qabeessa ta’een qaamolee sarbiinsa mirga namoomaa raawwatan ittigaafatamummaatti dhiheesuun araaraa fi nageenyaaf barbaachisaadha.